Varotra janoary, araraoty am-pahatsiarovana! | Bezzia
Varotra janoary, araraoty am-pahatsiarovana!
Maria vazquez | 09/01/2022 22:00 | ankehitriny
Ny zoma lasa teo ny varotra tamin'ny Janoary. Ny varotra izay tondroin'ny zava-drehetra dia hanatsara ny varotra raha oharina amin'ny fanentanana varotra 2021 ary azonay antoka fa maro aminareo no efa resy, diso ve izahay?
Ny hafa tsy nanatrika ny varotra araka ny tokony ho izy dia hahazo tombony amin'izany fihenam-bidy lehibe mandritra ny volana Desambra sy Janoary. Ary ny fanaparitahana ny varotra ve dia fironana izay nanaraka antsika tato anatin'ny taona vitsivitsy. Izy roa dia safidy tsara hahazoana ireo vokatra ilaintsika amin'ny vidiny mora kokoa, na izany aza, tsy mandeha ny zava-drehetra!
Manararaotra ny fitakiana fanomezana Krismasy aloha ireo magazay ary avy eo mivarotra izany manomboka amin'ny fomba ofisialy ny 7 Janoary, taorian’ny andron’ny Mpanjaka. Ary na dia maro aza ny fivarotana manomboka mampiroborobo fihenam-bidy vitsivitsy herinandro mialoha, mbola io no daty ahafahantsika miresaka amin'ny fomba ofisialy momba ny varotra.
1 Fanalahidy hanararaotra ny varotra
1.1 Aza mandany mihoatra noho izay azonao.
1.2 Araho ny vidiny mba hitsitsy
1.3 Jereo ny fepetra fividianana
1.4 Tazony ny tapakila sy ny fitakiana
Fanalahidy hanararaotra ny varotra
Ary inona no fanalahidy hanararaotra ny varotra? Mihoatra ny fihenam-bidy 50% ny varotra any amin'ny fivarotana sasany, noho izany tena mety hividianana izay tena ilaintsika. Na izany aza, ny fihenam-bidy dia tsy inona fa tetika hamporisika antsika hanohy ny fiantsenana izay tena mora latsaka. Halaviro izany ary tena manararaotra ny fivarotana miaraka amin'ireto torohevitra manaraka ireto.
Aza mandany mihoatra noho izay azonao.
Ny varotra dia fotoana tsara hanaovana izany mividy tsy mandany mihoatra. Na izany aza, raha mividy entana sasany ianao mba hahazoana fihenam-bidy fotsiny, dia tsy hisy intsony ny tahiry mety ho azon'ny varotra. Ary ahoana no hisorohana izany?
manaova lisitra mialoha izay ilainao.
Raha jerena ny lisitra teo aloha, ny vidiny azonao aloa amin'ny vokatra toy izany sy ny toe-bolanao mametraha tetibola ary hajao izany.
ataovy laharam-pahamehana. Raha tsy mamela anao hividy izay rehetra tadiavinao ny teti-bola, dia ataovy laharam-pahamehana izay ilaina indrindra.
Araho ny vidiny mba hitsitsy
Tena mitahiry vola amin'ny fividianana entana iray amidy ve ianao? Tsarovy fa misy fihenam-bidy tsy maintsy mampiseho ny vidiny tany am-boalohany eo akaikin'ny fihenam-bidy, na manondro mazava ny isan-jaton'ny fihenam-bidy. Na dia te-hividy zavatra misolo tena fampiasam-bola lehibe ho anao aza ianao, ny tsara indrindra dia ny volana maromaro alohan'ny hanarahanao ny lahatsoratra ary mariho ny fiovaovan'ny vidiny mba hahafantaranao raha tena mandoa vola ianao.
Jereo ny fepetra fividianana
Any amin'ny toerana sasany mety hiovaova ny fepetra hividianana amin'ny vanim-potoana fivarotana. Mety tsy hanaiky fandoavam-bola amin'ny carte de crédit izy ireo, hametraka fepetra vaovao ho an'ny fanovana na tsy hanaiky famerenam-bola. Afaka, saingy tsy maintsy ambara mazava ireo fepetra ireo. Rehefa misy fisalasalana dia jereo izy ireo!
Ny tsy tokony hiova dia ny serivisy aorian'ny varotra ary fampiharana fiantohana. Ireo, na inona na inona mividy ny vokatra mandritra ny varotra na ivelan'ny vanim-potoana, dia tsy maintsy mitovy. Aza avela hamitaka anao izy ireo!
Tazony ny tapakila sy ny fitakiana
Tazony ny tapakila amin'ny fividianana rehetra ataonao raha toa ka mila takalo, tamberina na mametraka fitakiana ianao. Ary raha te hanova na hamerina entana iray ianao dia tehirizo ao anaty boaty. Tsy voatery hamerina ny volanao ny orinasa rehetra, fa ny ankamaroany dia manolotra anao ny fahafahana manova izany na mahazo toeram-pivarotana ho an'ny vidiny handany any aoriana any amin'ny fivarotana.
Amin'ny maha-mpanjifa anao mandritra ny varotra dia hanana zo mitovy amin'ny fotoana rehetra amin'ny taona ianao. Raha misy olana ka tsy voavaha am-pilaminana dia hanana safidy foana ianao anontanio ny taratasy fitakiana ary diniho ny fitarainanao na ny fitarainanao.
Miantsena amin'ny orinasa matoky Ary amin'ny fanarahana ireo torohevitra ireo dia ho afaka hankafy ny varotra Janoary amin'ny fomba ara-pahasalamana ianao, miantsena amim-pahendrena ary tsy mila hanenenana rehefa avy nandany bebe kokoa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » ankehitriny » Varotra janoary, araraoty am-pahatsiarovana!
Ny tombony rehetra amin'ny basy fanorana
Ny soa azo avy amin`ny sira ranomasina ho an`ny vatana sy ny volo